Global Voices teny Malagasy » Miverina Miaraka Amin’ny Sarintanin’ny Fanafihana ny Pearl Harbor Tamin’ny 1941 Ny Tetikasa Sarintany Japoney Mitondra Zava-baovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Janoary 2017 9:40 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Arimalala
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tantara, Teknolojia
Pikantsarin'ny fitaovana fanaovana sarintany an-tserasera ny 1941 . Manondro ny lalan'ny fiaramanidina tamin'ny fanafihana ny Pearl Harbor ireo tsipitsipika feno sy mitsitapatapaka.
Manome vaovao momba ny fanafihana Japoney tao amin'ny Pearl Harbor  tamin'ny 7 Desambra 1941 ny iray amin'ireo Japoney mpikaroka Hidenori Watanave  mpanao sarintany amin'ilay tetikasa vaovao ifandrimbonana. Ny tetikasa, antsoina hoe Ny tetikasa 1941 , dia manasongadina ny fijoroana ho vavolombelona momba ny fanafihana avy any amin'ny manodidina ny nosy Oahu ao anaty sarintany iray, azo jerena ao amin'ny 1941.mapping.jp .
Toy izao no endriky ny Tahirin'ny Pear Harbor amin'izao fotoana izao. Rehefa avy eo, ho ampiako sarin'ilay fanafihana mihitsy.
Desambra 2016 no manamarika ny faha-75 taonan'ilay fanafihana. Manana fitaovana maro fanaovana sarintany natokana hiarovana sy hametrahana ho anaty sarintany ireo fijoroana vavolombelon'ny nahita maso ny ady i Watanave, anisan'izany ny sarintanyiray azo tetezina momba ny daroka baomba atomika tao Hiroshima  sy Nagasaki , ary ny ady tao Okinawa  tamin'ny 1945. Watanave  ihany koa no mpamorona ny tetikasa iray mitondra zava-baovao  mitovitovy amin'izany izay manaraka ireo fotoana farany niainan'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany tamin'ny Martsa 2011 sy ny tsunami tany Japana .
Ho an'ny tetikasa Pearl Harbor, napetrak'i Watanave ho anaty sarintany ny fijoroana vavolombelon'ireo nanatri-maso ny fanafihana voarakitra ao anatin'ny bokin'i Katrina Luksovsky “Nosy Ford 7 Desambra 1941: fanambàrana ireo fijoroana vavolombelon'ireo mponina nipetraka akaikin'ny tandavan-tsambo mpiady “.
Nipoaka tena teny akaikin'ny toerana fonenana (any amin'ny Nosy Ford) ny baomba sy ny balafomanga, ary nilentika tsirairay ireo sambo mpiady. Tsy maintsy hoe traikefa nampivarahontsana izany.
Ahitana sary natao ho an'ny sehatra ho an'ny daholobe hita ao amin'ny Wikimedia Commons  sy ny tahirin-kevitra fototra momba ny Ady Lehibe II  ihany koa ilay sarintany .
Ilay sambo mpiady USS Arizona, avy amin'ny ‘Pearl Harbor Archive’. Voaloko ho azy tamin'ny alàlan'ny fitrandrahana lalina ireo tambajotran'ny atidoha ireo sary fotsy sy mainty.
Na izany aza, ilay Tetikasa Fametrahana an-tsarintany ny 1941 dia lasa lavitra mihoatra ny Nosy Forland sy ny Tandavan-tSambo Mpiady tany Pearl Harbor. Nampiasain'i Watanave ny fitaovana an-tserasera  iray vaovao namboarin'ny Anjerimanontolo Japoney Waseda, izay mampiasa tambajotran'atidoha mba handokoana ireo sary ary mba hamelona indray ireo sary mainty sy fotsy izay nalaina nanerana an'i Aahu tamin'ny fotoanan'ny fanafihana.
Eto i Watanave, nahita sy niverina nandoko sarinà sambo mpisitrika iray nandray anjara tamin'ilay fanafihana ary tafahitsoka eny amin'ny torapasika.
Midgit manafika sambo mpisitrika tafahitsoka teo amin'ny torapasiky ny morontsiraka Oahu. Ny iray miloko, ampifanoherin'ireo sary ny hatsaràn'ny ranomasina sy ny fasika miaraka amin'ny lokon'ny fitaovam-piadiana.
Ho fandraisana anjara amin'ny tetikasa, nampidiriny sy naverin'i Watanave nolokoina ny maro amin'ireo sary manaitra tamin'ny fahafinana ny Pearl Harbor ny marainan'ny 7 Desambra 1941. Afaka hita ao amin'ilay sarintany azo tetezina noforonin'i Watanave izy rehetra ireny.
Navy Zero iray, mpiady Imperialy Japoney, manidina mankany amin'ny Nosy Ford (sy ny Tandavan-tsambo mpiady) ao Pearl Harbor. Nampiasaina handokoana ny sary ny “Neural networks” (tambajotran'atidoha). Avy amin'ny ‘Tahiry Pearl Harbor’
Setroka miakatra avy amin'ny sambo mpiady USS California.(Sary mainty sy fotsy tonga dia voaloko). Ary amin'ny ‘Tahiry Pearm Harbor’.
— Hidenori Watanave (@hwtnv) 8 Novambra 2016 
Sary milokon'ny fanafihana. Vehivavy miady amin'ny afo. Tsy mazava ny toerana nakàna ity sary ity ary sarotra araka izany ny mandrakitra an-tsarintany azy.
Tantsambo Amerikana mibohaboha (somebiseby) tamin'ny fotoanan'ny fanafihana. Setroka miakatra avy aty ambadiky ny sambo mpiady mirehitra. Raha tsaraina amin'ny endriny, zendanaamin'ny zava-mitranga (ireo tantsambo) .
Ny asa fanavotana tamin'ny USS Arizona. Sary voaloko ho azy. ‘Tahirin'ny Pearl Harbor’.
Mitohy ny asa fanavotana amin'ny sambo mpiady USS Arizona nilentika tany Pearl Harbor; 25 Fb 1942. Avy amin'ny Tahiry Pearl Harbor
Mampiseho sy mampahafantatra ny niainan'ny mponina manerana an'i Oahu ny fanafihana tamin'ny 7 Desambra 1941 ny sary.
Ny sisan'ny toerana iray fivarotana fanafody mirehitra tsikelikely tao Waikiki taorian'ny fanafihan'ireo fiaramanidina mpiady Japoney, 7 Desambra 1941 (Sary Ap) https://t.co/gHMf6Iv7HV  pic.twitter.com/RJC3aNICAc 
Satria mbola misy sary maro amin'ny aterineto, mbola vao ny ivelan'ny fametrahana ho anaty sarintany sy ny fandraketana fotsiny ireo fijoroana vavolombelon'ny nahita ny fanafihana no voakitik'i Watanabe.
Hitako tamin'ny alalan'ny fitadiavana momba ny Pearl Harbor 1941 tao amin'ny Tahirin'ny LIFE Magazine  ity sary ity. Tsy voalaza izay tompon'ny sary… Misy mahay ve hoe iza no naka azy io? Avy aty ankavanana ny sary naverina nolokoina nampiasana ny “neural Networks”.
Ankoatry ny tranonkala n'ilay tetikasa, ahitana sary nalaina avy amin'ny 0project koa ny fahan'ny Twitter an'ilay mpikaroka Hidenory Watanave .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/01/93007/
 fanafihana Japoney tao amin'ny Pearl Harbor: https://mg.globalvoices.orghttp://www.nationalww2museum.org/learn/education/for-teachers/primary-sources/pearl-harbor.html?referrer=https://www.google.ca/
 ady tao Okinawa: http://okinawa.mapping.jp/
 ny tetikasa iray mitondra zava-baovao: http://iwate.mapping.jp/
 horohorontany tamin'ny Martsa 2011 sy ny tsunami tany Japana: https://globalvoices.org/specialcoverage/2011-special-coverage/japan-earthquake-tsunami-2011/#featured
 Nosy Ford 7 Desambra 1941: fanambàrana ireo fijoroana vavolombelon'ireo mponina nipetraka akaikin'ny tandavan-tsambo mpiady: https://www.amazon.ca/Ford-Island-December-1941-collection/dp/1497435161
 tahirin-kevitra fototra momba ny Ady Lehibe II: http://ww2db.com/image.php?image_id=20441
 fitaovana an-tserasera: http://hi.cs.waseda.ac.jp:8082/
 8 Novambra 2016: https://twitter.com/hwtnv/status/799614409999982592
 Tahirin'ny LIFE Magazine: http://images.google.com/hosted/life
 fahan'ny Twitter an'ilay mpikaroka Hidenory Watanave: https://twitter.com/hwtnv